Sawirro+Warbixin: Shirka Hoggaamiyaasha Jaamacadda Carabta oo Ka Furmay Wadanka Urdun.
Wednesday March 29, 2017 - 19:57:11 in Wararka by
Mandiqadda Baxrul Mayit ee wadanka Urdun waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii 28-aad ee Ururka Jaamacadda Carabta.
Kulanka waxaa ka qeyb gelayay 16 hoggaamiye oo katirsan dowladaha dawaaqiidda Carabta iyo kor joogayaal ka socda wadamada reer galbeedka iyo Ururo Caalami ah.
Inta badan khudbadihii ay jeediyeen hoggaamiyaasha carbeed ayay uga hadleen qadiyadda Filasdiin gaar ahaan in ladhiso laba dowladood oo isku barbar noolaado.
Cabdalla Althaani oo ah boqorka wadanka Urdun oo shirka guddoominayay ayaa sheegay in haba yaraatee wax Nabad ah aan laga gaari Karin Bariga dhexe haddii aan ladhisin laba dowladood oo ay leeyihiin Filasdiiniyiinta iyo waxa loogu yeero israa’iil.
Boqorka Sacuudiga Salmaan Bin C/caziiz ayaa isna khudbadiisa ku sheegay in faragelin caalami ah lagu haayo arrimaha dowladaha carabta loona baahanyahay in Carabtu mowqif mid ah ka qaataan faragelinta dibadda isagoo si dadban udurayay dowlada Shiicada iiraan.
C/Fataa Alsiisi madaxweynaha Masar oo isna khudbad ka jeediyay shirka Ururka Jaamacadda Carabta ayaa kula taliyay dowladaha carabta in arrimahooda maamulka umadax banaanaadaan islamarkaan dowladaha carabta aan laga dhax dhisin manaadiq udanaynaya dowlado shisheeye.
Inta badan hoggaamiyaasha dabadhilifyada Carabta ayaa kalimadihii ay jeediyeen uga hadlay dhibaatooyinka ka jira wadamada Yemen,Liibiya iyo Suuriya waxayna ku baaqeen in wadahadallada Nabadda la taageero.
lataliyayaasha madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku sugnaa madasha shirka Urdun ka furmay sidoo kale xoghayaha guud ee Q.Midoobe ayaa isna khudbad ka jeediyay shirka wuxuuna ugu baaqay dowladaha carabta in ay xoojiyaan la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Falanqeeyayaasha arrimaha Carabta waxay sheegayaan in hoggaamiyaasha Ururka Jaamacadda Carabta aysan wax cusub kusoo kordhin kulankooda marka laga reebo in lacago Malaayiin dollar ah ay ku qarash gareeyeen isku imaatinkooda.
70 sanadood kadib aas-aaskii jaamacadda Carabta waxaa muuqata in ay gabeen muhiimaddii loo aas-aasay taasi bedelkeedna ay u shaqeeyaan wadamada reer galbeedka iyagoo umadda islaamka gaar ahaan carabta u horseeday kala qeybsanaan.